Lama-binoculars afaka umhlaba eminyakeni embalwa edlule lokhu yilokho abukeka njengamanje - izingcingo ze-teles
Lezi zingilazi zokubuka umhlaba zakha umhlaba Eminyakeni embalwa edlule, yilokhu ezibukeka njengamanje
Kuyinto engakholeki ngempela. Lab 'odade bobabili muhle kakhulu futhi babukeka befana kakhulu. Kusukela besebancane, ukubukeka kwabo kwaxhasa umhlaba wonke.
Lapho abazali bakaMegan noMorgan bethola ukuthi babelindele amawele angempela, bebengazi ukuthi bazolindelani. Shintsha ama-diapeter amaningi, kabili ubusuku obuningi bokulala kanye ne-stereo ekhala. Babecabanga ukuthi bekuwumzamo ophindwe kabili kodwa futhi nothando. Kodwa-ke, bebengacabangi ukuthi amawele abo azothola udumo emhlabeni jikelele.
I-Epoch Times ibika ukuthi laba dadewethu bazalwa ngoJuni 2011 futhi baba namagciwane emhlabeni jikelele beneminyaka emine nje kuphela, ngemuva kokuba umama wabo ethumele izithombe zamantombazane amabili ezinkundleni zokuxhumana.
Abantu babecabanga ukuthi amantombazane amabili anamehlo amahle ayemuhle.
Namuhla odade baneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala futhi basabukeka kahle! Nakhu ukuthi babukeka kanjani namhlanje:
Ku-akhawunti yabo ye-Instagram, banababhalisile abangaphezu kwe-150.
Sibafisela okuhle kodwa ngokuzayo! Zonke izingane zinhle nobuhle bungaphakathi!
Lo mbhalo uvele okokuqala ku-: https://onvoitout.com/il-y-a-quelques-annees-ces-jumelles-ont-enchante-le-monde-voici-a-quoi-elles-ressemblent-maintenant/
Lawa mawele afisa umhlaba eminyakeni embalwa edlulelokhu kubukeka njengamanje
IKenya: ifune indoda eboshelwe ukuhweba ngezindlovu ngokungemthetho
EZimbabwe: $ 3,5 bhiliyoni abakhokhelwe abalimi abamhlophe njengenxephezelo yomhlaba